Buy Bitter Apricot Seed 20:1 Extract Powder With Amygdalin Vitamin B17 Supplement Anti-cancer, Almond, Apricot Kernel - Free Shipping & No Tax | WoopShop®
Xashiishka Khudradda Cuntada 20: 1 Qaadi budada leh Amygdalin Vitamin B17 Cudurrada Kansarka, Almond, Miro Qalbi
$ 29.99 qiimaha joogtada ah $ 32.99
Color 1 dhalada 100 2 dhalada 200 6 dhalada 600
1 dhalada 100 2 dhalada 200 6 dhalada 600
Bitter Apricot Seed 20:1 Extract Powder With Amygdalin Vitamin B17 Supplement Anti-cancer, Almond, Apricot Kernel - 1 bottle 100 caps gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Waxyaabaha: Macmacaanka Khudradda Cuntada 20: 1 Extract Powder
NET WT: Qaybaha 100 / dhalada
Number Model: KXR500
tirada: Dhalooyinka 1-6
Waa maxay B17 ?:
B17 waa walax laga helo cuntooyinka kala duwan ee 1200, oo ay ku jiraan miraha noocyo badan oo miraha ah, sida khudaarta, khudradda, jiirka, liinta, nectarines, tufaax, fershin, iyo sidoo kale nuts ceeriin badan. Baasaboorka B17 dabiiciga ah waxaa laga soo saaraa miraha khudaarta. B17 wuxuu ahaa magaca la siiyay qaabka la nadiifiyey ee matoorka by a biochemist magacaabay Ernst T Krebs ee 1952. Waa shey aan dabiici ahayn oo laga helo cuntooyinka 1,200. Maanta B17 waxaa laga soo saaray miraha khudaarta.
Maxay muhiim u tahay B17?
Waxaan aaminsanahay in cunto isku dheeli tiran ay muhiim u tahay nolol caafimaad leh. Tiro yar oo naga mid ah ayaa ku filan vitamiin iyo macdano ku filan cuntooyinka aan cunno. Cunnooyinka nafaqada waxay noqdaan kuwo lagama maarmaan u ah shaqada jirka ee ugu habboon. Miro Miro B17 waa mid ka mid ah nafaqooyinka badan ee jirkeena u baahan.
Yaa ubaahan in uu qaato badeecada ?:
Dadka qaba dhibaatooyinka neefsashada waxay ku haboon yihiin; bukaanka kansarka iyo shucaaca daaweynta postoperative iyo kemotherabi oo ku habboon isticmaalka aadanaha.
Jirka dumarka iyo lafdhabarta badan, lafdhabarta jirrada ee waayeelka ah, xaddiga kaadida iyo carruurta oo ku haboon isticmaalka aadanaha.
Ilmaha Shensi, Yin iyo shuban, saxaro dabacsan oo xannibaya adeegga.
Xaacad xun iyo kuwo kale oo aan la siin karin. Xaaladda dhabta ah iyo faylka iyo in la qaado, waxaa lagu rakibi karaa daroogo ku habboon.
Cunnayaasha qadhaadhka ah ee qadhaadh ayaa yarayn kara qufac, xannuun diimeed, daaweynta qaaxada, qufaca, cudurada sanbabada iyo wixii la mid ah.
Badanaada iyo badarka badarka ee macaan ee aan cunno maalin kasta si aan u qoyo, waxay leeyihiin shaqeyn sambab oo buuxa
Almond sidoo kale waxaa ku jira flavonoids iyo qaabka polyphenols, noockan noocan oo kale ah ma yareyn karo oo kaliya hoos udhaca baruurta, weli wuxuu si weyn u yareeyn karaa cudurka wadnaha iyo cuduro badan oo soo noqnoqda oo khatar ah.
Almond sidoo kale waxay leedahay saameynta timo, waxay kor u qaadi kartaa microcirculation maqaarka, ka dhig maqaarka maqaarka cas.
Almond waxay leedahay saameyn liddi ku ah antitumor
Can't believe I found! Thsnks
Gaadiid degdeg ah. Weli inaanan isticmaalin sheyga laakiin waxaan rajeynayaa natiijo wanaagsan. Waad ku mahadsan tahay markale wax walba.
Macaamiishu waxay noo qiimeeyaan 5.0 / 5 oo ku salaysan dib u eegista 48776.